MB 2015 Mey - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Mey
Izahay dia mivezivezy amin'ny maha mpanao majika, voafatotra amin'ny rojo ary mahazo tokana, ahena ao anaty fitoeran-drano lehibe. Avy eo mihidy ilay tampony ary ilay mpanampy mpanao majika dia mijanona eo amboniny ary manarona ilay tankina amin'ny lamba manarona azy. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia nirehitra ilay lamba ary gaga izahay ary faly fa ny mpanao majika izao dia ao anaty tanky ary ny mpanampy azy, voatana amin'ny gadra. Ity "fifanakalozana" tampoka sy mistery ity dia mitranga marina eo imasontsika. Fantatsika fa fampiasa izany. Fa ny fomba tsy nahatanteraka an'izany dia tsy mbola nambara, noho izany fahagagana ny «majika» izany dia azo averina ho gaga sy fifaliana ny mpijery hafa.
Ny Kristiana sasany dia mihevitra ny batisa ho toy ny ody; mandeha ao anaty rano vetivety ianao dia voasasa ny ota ary mipoitra avy ao anaty rano ilay olona toy ny hoe teraka indray. Saingy ny fahamarinana ara-Baiboly mikasika ny batisa dia mampientam-po kokoa. Tsy ny fanaovana ny batisa mihitsy no manatanteraka famonjena; Notanterahin'i Jesosy ho solontenantsika sy solontenantsika. Efa ho 2000 taona lasa izay no namonjeny antsika tamin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarany.
Tsy amin'ny asan'ny batisa no ataontsika ny faharatsiana sy ny fahotantsika amin'ny fahamarinan'i Jesosy. Jesosy dia tsy manaisotra ny fahotanny olombelona isaky ny olona atao batisa. Nanao izany indray mandeha Izy tamin'ny alàlan'ny batisany, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty ary fiakarana. Ny fahamarinana mahafinaritra dia izao: amin'ny alalan'ny batisantsika dia mandray anjara ara-panahy amin'ny batisan'i Jesosy! Natao batisa isika satria i Jesosy, amin'ny maha solontenantsika sy solontenantsika, dia natao batisa ho antsika. Ny batisantsika dia sary ary firesahana amin'ny batisany. Nametraka ny fitokisanay tamin'ny batisan'i Jesosy isika fa tsy ny anay.
Zava-dehibe ny mahatsapa fa tsy miankina amintsika ny famonjena antsika. Toy ny nosoratan’ny apostoly Paoly izany. Momba an’i Jesosy io, momba ny maha-izy azy sy izay nataony ho antsika (ary mbola hataony hatrany): «Ianareo koa dia manana trosa amin’ny fanananareo rehetra amin’ny fiombonana amin’i Jesoa Kristy. Izy no fahendren’Andriamanitra ho antsika. Izy no ahazoantsika sitraka eo anatrehan’Andriamanitra, ary Izy no ahazoantsika fiainana sitrak’Andriamanitra, ary Izy koa no nanafahana antsika tamin’ny fahadisoantsika sy ny fahotantsika. Koa marina izao ny voalazan’ny Soratra Masina hoe: Raha misy te hirehareha, dia aoka ho reharehany izay nataon’Andriamanitra taminy! (1. Korintiana 1,30-31 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Isaky ny mieritreritra izany aho amin'ny herinandro masina dia manohina ny foko ny eritreritra hankalaza ny batisako. Rehefa manao izany aho dia mahatsiaro ny batisako taona maro lasa izay, izay mihoatra noho ny ahy, amin’ny anaran’i Kristy. Io no batisa nanaovan’i Jesosy ny tenany ho solontena. Misolo tena ny taranak’olombelona, ​​i Jesosy no Adama farany. Tahaka antsika, dia teraka olombelona izy. Velona sy maty ary natsangana niaraka tamin’ny vatan’olombelona be voninahitra ary niakatra tany an-danitra. Rehefa atao batisa isika dia mifandray amin’ny batisan’i Jesosy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Izany hoe, raha atao batisa isika, dia atao batisa ao amin’i Jesosy. Io batisa io dia Trinite manontolo. Rehefa nataon’i Jaona Mpanao Batisa zanak’olo-mpiray tam-po taminy batisa i Jesosy, dia nomena toy izao ny Trinite: “Rehefa nivoaka avy tao amin’ny rano Jesosy, dia nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Tamin'izany andro izany dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: 3,16-17 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Jesosy dia vita batisa amin'ny andraikiny ho ilay hany mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona. Natao batisa ho an'ny olombelona izy ary ny batisantsika dia midika hoe mandray anjara amin'ny fitiavana ny zanak'olombelona feno sy feno ny zanak'Andriamanitra. Ny batisa no fototry ny fifandraisana hypostatic izay ifonan'Andriamanitra amin'ny maha-olombelona ary manatona an'Andriamanitra ny olombelona. Ny fifandraisana hypostatic dia teny teolojika izay nalaina avy amin'ny teny grika hoe hypostasis, izay mamaritra ny firaisana tsy azo sarahina amin'ny maha-andriamanitra Kristy sy ny olombelona. Koa i Jesosy dia Andriamanitra sy ny olona rehetra amin'ny fotoana iray ireo. Amin'ny maha-olombelona tanteraka sy tanteraka antsika, i Kristy amin'ny maha-izy azy no manakaiky an'Andriamanitra antsika sy manakaiky an'Andriamanitra. Manazava izany toy izao i TF Torrance:
Ho an'i Jesosy, ny batisa dia midika fa notendrena ho Mesia izy ary izy, tahaka ny olo-marina, dia nanjary iray niaraka amintsika, nanaiky ny tsy rariny hitoerantsika ka ho lasa antsika ny fahamarinany. Ho antsika, ny batisa dia midika fa lasa iray Aminy isika, mizara ny fahamarinany, ary isika nohamasinina ao aminy ho mpikambana ao amin'ny vahoaka mesianika, tafaray ao amin'ny vatana iray ihany. Misy batisa sy vatana iray amin'ny alàlan'ny fanahy iray. I Kristy sy ny fiangonany dia mandray anjara amin'ny batisa iray amin'ny fomba samihafa, Kristy mavitrika sy ho an'ny Mpamonjy, ilay fiangonana amin'ny fomba mazoto ary amin'ny fahavononany ho fiangonana navotana.
Rehefa mino ny kristiana fa voavonjy amin'ny alàlan'ny fanaovana batemy, dia tsy takatr'izy ireo hoe iza i Jesosy ary nanao izany ho Mesia, mpanelanelana, mpampihavana, ary mpamonjy. Tiako ny valiny nomen'i TF Torrance fony izy voavonjy. "Voavonjy tamin'ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny 2000 taona lasa izay aho." Ny valin-teniny dia manazava ny marina fa ny famonjena dia tsy ao amin'ny traikefa amin'ny batisa fa amin'ny asan'Andriamanitra ao amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Rehefa miresaka momba ny famonjena isika dia averina amin'ny fotoana misy ny famonjena, izay tsy nisy ifandraisany amintsika fa ny zava-drehetra misy amin'i Jesosy. Fotoana nanirahana ny Fanjakan'ny Lanitra io ary ny drafitra natolotr'Andriamanitra hanandratra antsika dia hajaina amin'ny fotoana sy ny habaka.
Na dia tamin'ny batisako aza dia tsy azoko tanteraka ny zava-misy momba ny famonjena efatra, dia tsy marina, tsy marina. Ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo dia miahy an'i Jesôsy rehefa mampiray antsika izy ary mitambatra Aminy. Ireo fanehoana fankasitrahana feno fankasitrahana ireo dia tsy mifanandrify amin'ny hevitr'olombelona fa araka ny fandaharam-potoan'Andriamanitra. Na manao ahoana na manao batisa antsika amin'ny famafazana, fanondrahana na fandriana, dia ny tena nataon'i Jesosy ho antsika rehetra amin'ny alàlan'ny Sorompanavotany. Manaraka ny ohatr'i Jesoa isika ao amin'ny Grace Communion International ary mazàna manao batisa amin'ny alàlan'ny fandrobohana tanteraka. Tsy azo atao foana anefa izany. Ohatra, ny ankamaroan'ny fonja dia tsy mamela ny fanaovana anaty rano. Betsaka ny olona malemy tsy afaka milefitra, ary mety ny famafazana ny zazakely. Mamelà ahy hanambatra izany amin'ny teny hafa avy amin'ny TF Torrance:
Izany rehetra izany dia manampy mba hanazavana fa mandritra ny batisa, ny asan’i Kristy sy ny asa ara-pivavahana amin’ny anarany dia tsy ho takatra amin’ny farany ny hevitry ny zavatra ataon’ny fiangonana, fa izay nataon’Andriamanitra ao amin’i Kristy, izay ataony ankehitriny sy koa hataon'ny fanahiny ho antsika amin'ny ho avy. Ny maha-zava-dehibe azy dia tsy miankina amin'ny fombam-pivavahana sy ny zava-bitany irery, na ny fiheveran'ny olona vita batemy sy ny fankatoavany ny finoana. Eny fa na dia ny fanondroana tsy misy dikany momba ny batisa aza, izay araka ny natiora dia fihetsika tsy mitsahatra mandray ny batisa fa tsy manao izany, dia mitarika antsika hahita ny dikany ao amin’i Kristy velona, ​​izay tsy afa-misaraka amin’ny asany efa vita, izay manolotra ny tenany ho antsika amin’ny alalan’ny ny herin’ny zava-misy iainany (Theology of Reconciliation, p. 302).
Amin'ny fahatsiarovana ny Herinandro Masina sy ny fiandrasana ny hankalazana ny sorona tian'i Jesosy ho antsika, dia mitadidy ny fahatsiarovako ny andro nanaovana ahy batisa nanaovako rano. Mahazo tsara kokoa sy lalina kokoa aho ny amin'ny fankatoavan'i Jesôsy ny finoana ho antsika. Ny fanantenako dia ny fahatakarana tsara kokoa ny bateminao dia fifandraisana marina amin'ny batisan'i Jesoa ary ho antony hankalazana foana.
Mendrika fankasitrahana sy fitiavana ny batisanay,